Fitazonana datim-pifaninanana :: Narehitra tsy nisy mpanatrika ny Afo olympika • AoRaha
Fitazonana datim-pifaninanana Narehitra tsy nisy mpanatrika ny Afo olympika
Tanteraka, tamin’ny ala­kamisy lasa teo, ny fandre­hetana ny Afo olympika tany amin’ny tanànan’i Olympie, Grika, hoentina manamarika ny fisian’ny Lalao Olympika amin’ity taona ity.
Miainga avy any amin’ity tanàna manan-tantara ity ny afo hoentina hampirehetina any Tokyo (Japana), amin’ ny lanonam-panokafana ny lalao, amin’ny 24 jolay 2020. Hotontosaina amin’ny 24 jolay – 9 aogositra 2020 ny andiany faha-32 amin’ io lalao goavana maneran-tany io.
Mpilalao sarimihetsika grika, Xanthi Georgiou, no nandrehitra ny afo, tamin’ ny alakamisy.
Na eo aza ny areti-mifindra “Coronavirus” dia tsy mihemotra amin’ny fanapahan-keviny ny Komity iraisam-pirenena olympika amin’ny “tsy hanafoanana na hampihemotra ny lalao”. Naneho ny fahavononany ihany koa ny fanjakana japoney, izay mandà tanteraka ny hanaovana ny lalao amin’ ny kianja tsy misy mpijery.
Tamin’ny taona 1984 no nisy fampirehetana Afo olym­pika tsy nisy lanonana sy tsy nisy mpijery tany Olympie, noho ny tsy fankatoavan’ i Grika ny fanombohan’ny fitadiavam-bola tamin’ny lalao, tany Los Angeles, Etazonia, tamin’io taona io.
Baolina kitra – «CAN 2021» :: Nahemotry ny CAF ny lalaon’ ny Barea sy Elefanta